INSTAGRAM ပေါ်ရှိ LONDON ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝသောကလေးများသည်မည်သူများနည်း။ ငါတို့တွေ့ပြီ - သတင်း
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၊ အမြန်ကားများနှင့်အဆီအလိပ်များဖြင့်လောင်းကစားခြင်း - လန်ဒန်၏ကြွယ်ဝသော Insta ကလေးများသည်မည်သူတို့နည်း။
My Super Sweet 16 ကိုကြည့်ပြီးသင်နှင့်သင်၏မိဘများထံမှရရှိသောအရာအားလုံးသည် Pizza Express မွေးနေ့ညစာဖြစ်သော်လည်းသင်၏အသက်အရွယ်သည်သင့်ဘဝနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်မှန်၌မည်သို့နေထိုင်နေသည်ကိုသင်စဉ်းစားမိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါဆိုဒီလူတွေဟာဘယ်တော့မှသွားမသွားဘူး။ MTV ကိုသူတို့၏ခမ်းနားထည်ဝါသောလူနေမှုပုံစံကိုရိုက်ကူးပြီးမိနစ် ၃၀ ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ်သို့ချုံ့မည့်အစား၊ ဤသူများသည်သူတို့၏ကြွယ်ဝမှုဖြစ်သော Instagram ကိုပြသရန်နည်းလမ်းသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပြီး ၆၀၀k လူ ဦး ရေရှိတဲ့ Instagram အကောင့်တစ်ခု၊ လန်ဒန်၏ကြွယ်ဝသောကလေးများ သူတို့အတွက်လုပ်ပေးသည်
သီးသန့်ဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲကျင်းပခြင်း ?? @lanascolaro ၏ယဉ်ကျေးမှု
မျှဝေသည် လန်ဒန်၏ Rich ကလေးများ 7:35 pm တွင် PDT မှာနိုဝင်ဘာ 1, 2017 ရက်တွင် (@richkidslondon)
မည်မျှရက်စွဲများသူ့ကိုကျော် ဖိတ်ခေါ်. မတိုင်မီ
ဤစာမျက်နှာတွင်လူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းသောကြွယ်ဝသူများ၏ဘ ၀ များတွင်နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်မှုများကိုဖော်ပြသည်။ သူတို့ကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်တွေ၊ အမြန်ကားတွေရှေ့မှာငွေအများကြီးထည့်ထားတယ်။
Dor Bukobza (@dorbukobza)
မိမိကိုယ်ကို 'ခရီးသွားလုပ်ငန်း' အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်တစ်ချိန်ကစင်ကာပူနှင့်ဟောင်ကောင်တို့တွင် ၁၁ ရက်ကြာစျေးဝယ်ထွက်ခဲ့သည်။
#happy #independence #day #israel ?? #champagne သောက်ပါ ??
မျှဝေသည် Dor Bukobza 8:23 pm တွင် PDT မှာမေလ 1, 2017 ရက်တွင် (@dorbukobza)
အစ္စရေးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်မှာ Insta နောက်လိုက် ၆၀ ကျော်ရှိပြီး Vine Vera ကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပြီးအရောင်းစာရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူက 'ပိုက်ဆံကငါ့အတွက်သိပ်မလွယ်ဘူး' လို့အခိုင်အမာပြောတယ်၊ ဒါကိုသူ့ကျိုးနွံစွာ Instagram အကောင့်မှာတွေ့နိုင်တယ်။
#iphonex ဟာဂိမ်းအသွင်ပြောင်းသူလို့ပြောရမယ်။ שבתשלום❤️
မျှဝေသည် Dor Bukobza 11:58 pm တွင် PDT မှာနိုဝင်ဘာ 3, 2017 ရက်တွင် (@dorbukobza)
သင်၏ပျမ်းမျှလူစွမ်းကောင်းမဟုတ်ပါ။ ❤️ပဝါသည်ကျွန်ုပ်သည် Hapoel Tel Aviv ပန်ကာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မတ်မတ် - ရလားလား၊ #lvxsupreme #louisvuitton #lv #supreme
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်၊ ညနေ ၇း၃၂ တွင် Dor Bukobza (@dorbukobza) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
#weekend # လိုအပ်ချက်များ x #louisvuitton x #hermes က x #cartier
နံနက် ၈:၂၀ နာရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ တွင် Dor Bukobza (@dorbukobza) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Matilde Faria (@matildefmf)
Matilde သည်ကျော်ကြားသောဘောလုံးကစားသမားဟောင်းနှင့်လက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘောလုံးမန်နေဂျာဟိုဆေးမော်ရင်ဟို၏သမီးဖြစ်သည်။ သူမမှာ Instagram ပေါ်မှာနောက်လိုက် ၃၀ နီးပါးရှိတယ်။
မျှဝေသည် Matilde Faria 8:24 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 11, 2017 ရက်တွင် (@matildefmf)
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှထင်ရှားသောဓာတ်ပုံများတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူမ၏ Instagram သည်ပန်းတိုင်သို့ရောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင်ပန်းအားရနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။
မျှဝေသည် Matilde Faria 7:41 pm တွင် PDT မှာနိုဝင်ဘာ 2, 2017 ရက်တွင် (@matildefmf)
နွေးထွေးမှု paris, နေဖို့သိပ်တိုတောင်း?
မျှဝေသည် Matilde Faria 9:15 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 23, 2017 ရက်တွင် (@matildefmf)
Ellie O'Donnell (@missellie_o)
279k နောက်လိုက်များနှင့်အတူ Huddersfield မှမော်ဒယ် / သြဇာသက်ရောက်မှုသည် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးသော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Miss England အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Lipsy ကဲ့သို့သောပုံစံကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
ညနေ ၆ နာရီအကြား - ညသန်းခေါင်အထိတစ်ခုတည်းသော BLOGGER30 နှင့်အတူ Blogger စတိုင် @misspap ၏ ၃၀% သော ???
မျှဝေသည် Ellie O'Donnell 10:52 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 19, 2017 ရက်တွင် (@missellie_o)
Ellie တွင်တူညီသောကျော်ကြားလှသောညီမ Daisey O'Donnell သည်အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးသော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် X Factor တွင်ပေါ်လာသည်။ နောက်လိုက် ၂၇၁ ယောက်နှင့်အတူ Ellie O'Donnell သည်လူမှုမီဒီယာတွင်နှိမ့်ချစွာနေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
မွေးနေ့ပွဲလား။ @daiseyodonnell #sistersister
မျှဝေသည် Ellie O'Donnell 12:57 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 16, 2017 ရက်တွင် (@missellie_o)
ကိုဖီ၏နောက်လိုက် ၁၂၃ ယောက်ရှိပြီးဘလော့ဂါနှင့်စီအီးအိုဖြစ်သည် KFW , သူ့ဘလော့ဂ်ဖြစ်သော။ DED ။
မျှဝေသည် Kofi Casè 2:04 pm တွင် PDT မှာ 2017 စက်တင်ဘာ 6, 2017 (@kofixcase)
ဖက်ရှင်ဝါသနာအိုးကိုဖီကသူ့ဘလော့ဂ်တွင်ဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - 'ကျွန်ုပ်ကလေးဘဝကတည်းကဖက်ရှင်သည်ငါ့ဘဝ၌ရှိခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Issa Gucci Vibe? P.S. @thekenyamoore နှင့် #MarcDaly ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ် ?? ?
မျှဝေသည် Kofi Casè 11:18 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 19, 2017 ရက်တွင် (@kofixcase)
“ ကျနော့်မိဘတွေကဖက်ရှင်လုပ်ငန်းမှာအမေဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ပုံစံ၊ ငါ့ Farther ရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်ခဲ့တာ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်မိမိကိုယ်ကိုခန့်မှန်းခြေ ၁၆,၀၀၀ ခန့်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုပေးခဲ့သည်။ ' သူလည်းပြုံးနေဟန်မရှိပါ။
မျှဝေသည် Kofi Casè 10:18 pm တွင် PDT မှာဇွန် 10, 2017 ရက်တွင် (@kofixcase)
Tomutė Penk (@tomutepenk)
အသက် ၂၁ နှစ်ရှိလစ်သူယေးနီးယားမှသြဇာသက်ရောက်သူ / မော်ဒယ်လ်သည်သူ့ကိုယ်သူမင်းသမီးဟုခေါ်ပြီးအားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ရာနေရာများတွင်သူစိမ်းခိုးယူမှုများပြုလုပ်သည်။ သူမသည်နောက်လိုက် 43k ရှိပါတယ်။
မျှဝေသည် Tomutė Penk 2:58 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 12, 2017 ရက်တွင် (@tomutepenk)
မိုနာကို vibesss #avendatorlimitededition
မျှဝေသည် Tomutė Penk 12:46 pm တွင် PDT မှာ 2017 ဇွန် 30, 2017 (@tomutepenk)
သူမဘာလုပ်သလဲဆိုတာအစစ်အမှန်အရိပ်အယောင်မတွေ့ရပါ။ သူမ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်တွင်သူမက“ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချောကလက်အဖျော်ယမကာ” ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သူမ၏ကျော်ကြားမှုပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူမအတွက်အချိန်ပင်ရှိသည်ဟုသံသယဝင်သည်။
Mykonos ရှိကျွန်ုပ်၏အမဲလိုက်ခြင်းကို #iseeyouboys အဆင့်သို့ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ???
မျှဝေသည် Tomutė Penk (@tomutepenk) ဇူလိုင်လ 23, 2017 တွင် 5:48 pm တွင် PDT မှာ
- ဆယ့်ရှစ်အမျိုးအစားရှိသည်။ မင်းကဘယ်သူလဲဆိုတာငါပြောမယ်
- ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် uni မှာချိုးဖောက်ခံရခြင်းကသင့်ကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်စေမှာမဟုတ်ဘူး
- London တွင်ရှိသော Rich Kids သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့်ရှိသည်